Lahatsoratra momba an'i Amerika
Ahoana ny fomba hahazoana Job any California?
Jolay 16, 2021 Antika Kumari asa, USA
Araka ny filazan'ny American Immigration Council, any California dia misy mpifindra monina 10 tapitrisa mahery. Manisa mihoatra ny ampahefatry ny mponina ao aminy ary manodidina ny roa heny ny salan'isan'ny firenena. Ny mpifindra monina koa dia mahatratra 30% amin'ireo fanjakana
Visa any Etazonia ho an'i Afghanistan
Jolay 9, 2021 Shubham Sharma Afghanistan, Travel, USA, visa ho
Etazonia i Etazonia no firenena matanjaka indrindra eran-tany. Izy io koa dia iray amin'ny toerana tsara indrindra hipetrahana eto amin'izao tontolo izao na dia lafo aza ny mipetraka any Etazonia. Misy ny
Firenena tsy misy Visa ho an'i Kanada
Jolay 2, 2021 Maitri Jha Kanada, Travel, visa ho
Firy ny firenena azon'ny Canada aleha tsidihina raha tsy misy visa? Hevero fa tsara vintana ianao raha manana pasipaoro kanadiana! Raha tsy misy visa, afaka mitsidika firenena 140 ianao. Ny pasipaoro no endrika famantarana be mpampiasa indrindra ao amin'ny
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Canada? Tari-dalana haingana ho an'ny vahiny
Enga anie 28, 2021 Karuna Chandna Kanada, asa
Zava-dehibe Penny tokana !! (Mihazakazaka mandray anjara ny tranokalanay, Na dia vola ariary 1 aza, raha tianao ny lahatsoratra, azafady mba mandraisa anjara) Raha avy any an-tany hafa ianao dia mila fahazoan-dàlana hiasa any Canada hiasa any Canada. Hiasa ao
Ahoana ny fomba hahazoana visa ho an'ny mpianatra any Canada?
Enga anie 28, 2021 Maitri Jha Kanada, fianarana, visa ho
Raha hianatra any Canada dia mila mangataka fahazoan-dàlana hianatra Kanada ianao, izay visa ho an'ny mpianatra mandritra ny fotoana ijanonanao. Raha enim-bolana na fohy kokoa ny taranja na fandaharana ataonao dia tsy mila izany ianao
Ahoana ny fomba hahazoana visa mpizahatany any Etazonia?
Enga anie 25, 2021 Maitri Jha USA, visa ho
Ny visa mpizahatany dia omena ireo mpitsidika izay maniry ny handeha ho any amin'ny firenena iray mandritra ny fialantsasatra na hijery ny fahitana. Ireo visa ireo dia manan-kery mandritra ny fotoana iray ihany ary tsy mamela ny mpitsidika vahiny hitsidika
Fomba ahazoana Job sy Miasa amin'ny chile.
Enga anie 18, 2021 Karuna Chandna Shily, asa
Chile dia manana loharanom-pahalalana betsaka ho an'ny mpampiasa vola vahiny sy ny ex-pats. Vakio ny tari-dalanay hahitanao bebe kokoa momba ny asa any Shily. Avy amin'ny fomba handehanana amin'ny fihazahana asa ka hatramin'ny etikety sy haba amin'ny orinasa. Tokony hivoaka ve ianao
Ahoana ny fomba hahazoana visa any Mexico ho an'ny Italiana? Torolàlana fohy
Aprily 21, 2021 Demi Italiana, Meksika, visa ho
Nanapa-kevitra ny hitsidika ny firenena mahafinaritra indrindra eran'izao tontolo izao ianao, Mexico! Hanontany tena tsara ianao hoe iza amin'ireo antontan-taratasy ilainao no ilaina: matetika, ho an'ny firenena ivelan'ny Vondrona Eropeana, dia tsy misy kara-panondro.
Ahoana ny fomba fangatahana visa any Mexico? Torolàlana fohy
Aprily 6, 2021 Antika Kumari Meksika, visa ho
Izay te-hitsangatsangana any Mexico dia manana safidy telo hangataka visa. Miankina amin'ireto safidy ireto: ny pasipaoronao, ny visa izay ao amin'ny pasipaoronao, ary ny fahazoan-dàlana hipetraka hafa tazoninao. Ireo safidy telo
Ahoana ny fomba fangatahana Visa any Canada?
Aprily 6, 2021 Shubham Sharma Kanada, visa ho
Ny visa mankany Canada dia ahafahanao mahazo alalana handeha amin'ny firenena ary hipetraka tsy tapaka mandritra ny fotoana maromaro. Hanana fomba fampiharana ianao arakaraka ny karazana visa tadiavinao. Misy a